10မီလီမီတာ Teflon စာရွက် - 10mm Teflon Sheet PTFE - 10mm Teflon Sheet Supplier - 10mm Teflon Sheet Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > Teflon စာရွက် > 10mm Teflon Sheet -
10မီလီမီတာ Teflon စာရွက်,10မီလီမီတာ Teflon စာရွက်အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Jul 22nd, 2015rating: 4.5Quality 10mm Teflon Sheet supply by COX Plastic10mm Teflon SheetBest 10mm Teflon Sheet supply by China COX Plastic with best price.
10မီလီမီတာ Teflon စာရွက်
10mm White Teflon Sheet Price COX Plastic only offer Virgin PTFE products. ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့လျှင်နှစ်ချက်လျော်ကြေး.
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 1.5 – 6.1 / ကီလိုဂရမ်
Min.Order အရေအတွက်: 300 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
supply နိုင်ခြင်း: 500 Ton/Tons per Month
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T,ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ
10mm White Teflon Sheet Price Packing & ပို့ခြင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: Pallets, wooden boxes or according to customer requirements
မူလအစရာ: Guangdong, China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox မော်ဒယ်နံပါတ်: T-S2061
ပစ္စည်း: PTFE, အထူ: 0.3mm-80mm အရွယ်: 1~2.0m
အရောင်: natural white Production process: High temperature and high pressure laminated Processing services: All kinds of machinery and equipment accessories
ဆန့်နိုင်အား ≥ 15 MPa
Spot goods size(width and length) 600မီလီမီတာ×600မီလီမီတာ,800မီလီမီတာ×800မီလီမီတာ,1000မီလီမီတာ×1000မီလီမီတာ, 1200မီလီမီတာ×1200မီလီမီတာ,1000မီလီမီတာ×2000မီလီမီတာ
4. Insulating property: does not receive the environment and the frequency influence,the volume resistance may amount to 1018 Ω•စင်တီမီတာ,the dielectric loss is small,the breakdown voltage is high
Cox ပလတ်စတစ် – PTFE စာရွက်တစ်ထုတ်လုပ်သူ, PTFE ကော်တိပ်, PTFE ရုပ်ရှင်, PTFE လှံတံ, PTFE ဆလင်ဒါ, PTFE ပြွန်, PTFE gasket.
3-100မီလီမီတာဗာဂျင်း Ptfe စာရွက်
Ptfe လှံတံ / တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း / စာရွက်
ကောင်းသော Ptfe Sheet များ
Ptfe / Teflon စာရွက်